Wararka | Radio Himilo | Page 81
Home / Wararka (page 81)
Warbixin: Sigaarka oo sababa cimri degdeg ka hor geerida
radio himilo April 20, 2016	Idaacadda Himilo, Wararka Leave a comment 82 Views
Warbixintan waxaan ku soo qaadanay Barnaamijka Hiigsiga Himilo oo si maallinle ah uga baxa Idaacadda Himilo. Waxaan uga faaloon doonaa dhibta uu sigaarku leeyahay, caqabadaha iyo xanuunada uu horseedo. Axmed Maxamed Haadi ayaa soo jeedinaya
Heegan iyo Dekedda oo kulan ka tirsan kubbadda koleyga isku farasaari doona
radio himilo April 19, 2016	Wararka, Xulka cayaaraha Leave a comment 45 Views
Kooxda kubadda koleyga Heegan ayaa kulan xiiso badan oo ka tirsan horyaalka kubadda koleyga dalkeena galabta kula balansan Wiish Stadium kooxda Dekedda. Heegan oo horyaalka daafacaneysa ayaa lugtii hore ka awood roonaatay dhigeeda Dekedda, iminka oo ay hogaanka horyaalka heysana ...
radio himilo April 19, 2016	Features, Wararka Leave a comment 102 Views
Dhageyso: Warbixin ku saabsan kuleylka awgii ragga qaar oo doorbiday in shaarar ay ka toshaan dharka baatiga
radio himilo April 18, 2016	Idaacadda Himilo, Wararka Leave a comment 86 Views
Warbixintan waxaynu ku soo qaadanay Barnaamijka Hiigsiga Himilo oo maallinle uga baxa Idaacadda Himilo. Waxaynu uga hadleynaa warbixintan ragga qaar oo doorbiday inay shaarar ka toshaan dharka baatiga kulleylaha awgii. Waxaa soo jeedinaya Nasri Axmed Maxamed, waxaana diyaariyay Maxamed Qadar ...
Arsenal oo sanadkan joojisay qabashada Emirates Cup
radio himilo April 18, 2016	Wararka, Xulka cayaaraha Leave a comment 46 Views
Kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa si sanadle ah u qabata koobka Emirates Cup oo qabsooma kahor xagaa walba, hayeeshee sanadkan kooxda ayaa baahisay in tartankaa uusan dhici doonin. Gunners ayaa tartankan u baajineysa qorshe la xiriira dib u dhis iyo ...
Mario Balotelli oo muujiyay inuusan farxad dareemin waayihiisii Liverpool
radio himilo April 18, 2016	Wararka, Xulka cayaaraha Leave a comment 57 Views
Wiilka weerarka ka dheela Mario Balotelli oo si amaah ah ula jooga kooxda kubadda cagta AC Milan ayaa xusay inuusan helin waqti farxadeed mudadii uu ku sugnaa gegada Anfield. Mario ayaa adduun lacageed dhan £16m uga soo dhaqaaqay kooxda AC ...
Dhageyso: Barnaamijka Sahanka Siyaasadda
radio himilo April 18, 2016	Idaacadda Himilo, Wararka Leave a comment 62 Views
Barnaamijka Sahanka Siyaasadda waa toddobaadle aad ka maqashaan Idaacadda Himilo, toddobaadkan waxa aan kaga hadli doonaa qeybtii labaad mawduucii quseeyay shaqada ay u qabato hey’adaha dowladda waaxda xiriirka dadweynaha oo afka qalaad lagu yiraahdo Public Relation in governmental institutions. Qeybtii ...
Cayaartoyda xulka qaranka Soomaaliya oo maanta dalka ka ambabaxay
radio himilo April 18, 2016	Wararka, Xulka cayaaraha Leave a comment 69 Views
Cayaartoyda labaatan jiradda xulka qaranka Soomaaliya ayaa maanta ka ambabaxay gegada Aden Cadde airport, iyagoo ku sii wajahan magaaladda Djebouti oo xarun u ah dalka Jabuuti. Cayaartoyda qarankeena ayaana lugta labaad Jabuuti kula dheeli doona dhigooda Itoobiya. Lugtii koowaad Soomaaliya ...
Leicester City oo barbaro la dhaafi weysay West Ham
radio himilo April 17, 2016	Wararka, Xulka cayaaraha Leave a comment 60 Views
Kooxda kubadda cagta Leicester City ayaa dharbaaxada bilowday kulankaan, markii daqiiqaddii 18aad uu shabaqa gaaray Jamie Vardy oo caawin ka helay Ngolo Kante. Qeybtii hore ee cayaarta ayaana lagu kala maray Leicester oo hogaanka heysa, nasiib darro qeybtii labaad daqiiqaddi ...
Liverpool oo saddex dhibcood ka qaadatay Bournemouth
radio himilo April 17, 2016	Wararka, Xulka cayaaraha Leave a comment 53 Views
Kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa guul muhiim ah ka gaartay kooxda Bournemouth oo loogu martiyay gegada Vitality Stadium. Roberto Firmino iyo Daniel Sturridge ayaa afar daqiiqo gudahood labo gool ku dhalisay dhammaadka qeybtii hore oo cayaarta. Qeybtii labaad oo cayaarta ...